Global Voices teny Malagasy » Sarahan’ny toetany sy ny politika, fa atambatry ny GV! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Jolay 2019 5:49 GMT 1	 · Mpanoratra Subhashish Panigrahi Nandika avylavitra
Sokajy: Mediam-bahoaka, Blaogim-Piarahamonina GV, fandikàna-voalohany, Lahatsoratra voalohany, Fahafolo taona
Tato anatin'ny 4 taona farany niainan'ny tena manokana sy 3 taona niainana tamin'ny sehatry ny asa tao amin'ny Open Source, dia tena nahafinaritra tsotra izao ny niarahana niasa tamina vondrom-piarahamonina marobe. Nahatsapa mandrakariva ho toy ny zaza bodo aho saingy liana rehefa sady mahazo torohevitra no mahazo fanakianana sy tànana marobe manampy ao anatin'ny fotoana ilànao azy. Efa mpamaky tsy tapaka ny GV aho tany aloha, ary nitady fanampiana mba hizaràna ireo vaovao momba ireo fanolorana votoaty maro dia maro ampiasàna lisansa Creative Commons avy ao India. Tamin'izay fotoana izay no nieritreretako ny hanoratra fa tsy ho mpamaky fotsiny intsony ireo votoaty izay amin'ny ankapobeny dia mivilana tsy mifanaraka amin'izay niandohany, hita teny anatin'ireo fampahalalambaovao ho an'ny daholobe. Nefa naniry aho ny ho afaka hitondra anjara biriky ety anaty aterineto, ary amin'ny tenindreniko Odia. Mbola tsaroako hatreto ilay tsipika maneho ireo fiteny isankarazany tery an-tendron'ireo pejy Global Voices. Tamin'ny fomba nahagaga, fiteny indiàna 3 ihany no hitako: Bangla, Hindi ary Urdu. Nanomboka nanontany tena aho momba ny antony tsy maha-ao ny Odia. Avy hatrany aho dia nisoratra anarana ho mpanoratra na dia tsy nahalàla na inona na inona momba ny fametrahana lingua vaovao tao aza. Rezwan , mpiahy ahy amin'izao fotoana izao no namaly ahy afaka andro vitsivitsy taorian'izay, niarahaba ahy noho ilay fisoratako anarana ho isan'ny mpanoratra. Mbola maha-toran'ny hehy ahy ihany ny nahalalàna ny fomba nahatongavanao ho amina toerana tsara iray nefa tsy nahay na inona na inona. Nisaotra tena aho noho io hadisoana kely io, dia ny nifandraisako taminy voalohany indrindra.
Rehefa naneho ny fahalinako amin'ny fiteny Odia aho dia nampifandraisiny tamin'i Paula  sy Gohary . Tamin'ny resaka Skype voalohany nifanaovanay, toy ireny mipetraka sy miresaka miaraka amin'ireo namako akaiky indrindra ireny aho. Iray amin'ireo fahatsiarovako tsara indrindra nananako nandritra ireo andro niainako tao amin'ny Open Source io. Tsy ilaina akory ny milaza hoe isan'ny iray tamin'ireo tetikasa Lingua 4 vaovao tamin'ity taona ity ny Odia. Rehefa naka toerana aho ary nieritreritra momba ireo olona 3 tsy mampino ireo, izay mbola vaovao tanteraka tamiko fotoana vitsy lasa izay, ary ankehitriny lasa namana akaiky, rohy mahafinaritra iray banga hatrizay no hitako.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/21/141790/